ချစ်စံအိမ်: မေ့မရတဲ့နေ့ ...............
ကျွန်မ ငယ်ငယ်က ဖြစ်ပျက်လေးပါ ဘယ်လို မှမေ့မရသလို အဲ့ ပုံရိပ်တွေက ခုထိ အရိပ်လိုပေါ်လာတတ်မြဲပါ..
ကျွန်မမှာ မကောင်းတဲ့ဥာဉ်ဆိုး တစ်ခုရှိတယ်... စိတ်ကောက်ခြင်းပါ... ကောက်ပြီးဆိုလည်း အနည်းဆုံး (၃)ရက် လောက်တော့ကောက်တတ်တယ်.။။ အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးကြာတတ်
တစ်နေ့ အမေက ကျွန်မကို ကျောင်းစာလုပ်ခိုင်းတယ်.. ကျွန်မက စာလုပ်ရတာကိုမကြိုက်ဘူး.. ၀ါသနာလည်းပါဘူး။
အရမ်းပျင်းတာ မိဘဆိုတော့လည်း ချော့ပြောခြောက်ပြောနဲ့ ပေါ့...ဗီဒီယိုသွားကြည့်ချင်ရင် အိမ်စာကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။။
ပြီးရင် သွားကြည့်ရမယ်လို့ အမေပြောတော့ ကျွန်မ လည်း ကလေးဆိုတော့ကြည့်ချင်တာပေါ့.. သိပ်လည်းမကြည့်ရတော့
အရမ်းပျော်ပြီးစာလုပ်တော့တာပဲ.. အမေတို့ က ရွာကသူတွေနဲ့ ပေါင်းတာမကြိုက်တော့ ဗီဒီယိုတွေလည်းမကြည့်ရပါဘူး။။ အိမ်မှာလည်းမရှိတော့အရမ်းကြည့်ချင်မိတယ်.။။ ကျွန်မစာကိုကြိုးစားလုပ်တာပေါ့။
အားလုံးပြီးတော့ အမေ သမီးပြီးပြီ.. ပြီးရင်ထမင်းလာစားတဲ့ ကျွန်မ ကြားချင်တာအဲဒါမဟုတ်ဘူးလေ... အမေ ဗီဒီယို
သွားကြည့်ရမှာလေ... ထမင်းအရင်လာစားပါ..... ဒါနဲ့ မြန်မြန်ပဲစားလိုက်တယ် .... အမေပြီးပြီ သွားတော့မယ်....
ပြနေလောက်ပြီးပြောတော့ မသွားပါနဲ့ သမီးရယ်... အမေပုံပြောပြမယ်... ပြောလိုက်တော့... ဘာဖြစ်သွားလည်းမသိဘူး။။။ ဒေါသထွက်သွားပါလေရော... ကျွန်မ အမေကို စကားမပြောတော့ဘူး။။။ စိတ်ထဲမှာလည်း အမေကို မုန်းမိတာပေါ့... ကတိမတည်ဘူး... ကျွန်မကို ညာတယ်ဆို ပြီး စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်
ဒေါသလည်းထွက်.. အမေကို မကြည့်ချင်တော့တာနဲ့အဖွားတို့ နေတဲ့ရွာကို သွားမယ်လုပ်နေတုန်း အမေက သိနေတယ်ထင်ပါ့။။. သမီး ဘယ်မှမသွားနဲ့ နော်... ဒီနေ့ မုန်တိုင်းရှိတယ်... မိဘကို စိတ်ကောက်ထားတာ မကြောက်ဘူးလားတဲ့...့ ကျွန်မ စိတ်ကောက်ပြီးဆို စကားမပြောတော့ဘူး။။။ ကျွန်မ ဒေါသက ကျဒေါသဖြစ်နိုင်တယ်။။။ ကျွန်မ ဘာမှပြန်မပြောပဲ... ထွက်လာခဲ့တယ်... ရွာထိပ်အထွက်လောက်မှာ မိုးစရွာလာပါတယ်။။။ အဖွားတို့ ရွာနဲ့ ကျွန်မတို့ ရွာက မိနစ် (၄၀) လောက်တော့သွားရပါတယ်...သုံးပုံ တစ်ပုံလောက်အရောက်မှာတော့ မိုးခြိမ်းလာတယ် လေတိုက်လည်းကြမ်းလာတယ်.။။။ ကျွန်မ ကြောက်သွားမိတယ်။။ ရှေ့ ဆက်သွားရမလား။ ပြန်လှည့်ရမလား .. အကွာ အဝေး ကြည့်မိလိုက်သေးတယ်။။ စိတ်ကကောက်နေတော့ အိမ်လည်းမပြန်ချင်ဘူး.. ဒါနဲ့ ဆက်သွားတော့ လျှပ်စီးတွေ
လေတွေတိုက်ပြီး မှောင်သွားတယ်.။။။ ကျွန်မလည်း ကလေးအင်အားနဲ့ လွင့်မသွားအောင် ရေထဲခုန်ချလိုက်တယ်။။။
ကျွန်မ အရမ်းကြောက်နေပါပြီး လယ်ကွင်းထဲမှာလည်း ဘယ်သူမှမတွေ့ ဘူး။။။ ဘယ်သူကို အကူအညီတောင်းရမလည်း.. ကျွန်မ ရေထဲမှာပဲ ငိုနေတုနုး ခက်လှမ်းလှမ်းကနေ တွေ့ လိုက်ရတာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ပိန်ကပ်ကပ် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပေါ့... ကျွန်မ ပျော်သွားတယ်.. လူတစ်ယောက်လာနေတယ်... အကူအညီတောင်းမယ်ပေါ့... မျက်ရည်ကြားကနေ ပြုံးလာမိတယ်။။။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုအမျိုးသမီးက လေဒဏ်မိုးဒဏ်ကို သူမရဲ့ ပိန်ကပ်ကပ်ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အံတုလို့ ပေါ့.. ကျွန်မလည်း လေဒဏ်ကြောင့်ထင်တယ် ....လှိုင်းလုံးတွေနဲ့ ရေတွေမွန်းလို့ ပေါ့ ... ကျွန်မ ခံနိုင်ရည်မရှိတော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းမထိမ်းနိုင်တော့ဘူး။။ ရေဒဏ် လေဒဏ်ကို ခံနေတုန်းမှာပဲ အသံ တစ်ခု ကျွန်မ ကြားလိုက်တယ်.... သမီးရေ..... သမီး.........
ဒါ အမေ့ အသံဆိုတာ ကျွန်မသိလိုက်တယ် .. ဒါဆို ထို အမျိုးသမီးက ကျွန်မ အမေလား ကျွန်မ သေချာမမြင်ရတော့ဘူး။။။ အသံလည်းမထွက်တော့ဘူး။။။ အားတင်းပြီး ကျွန်မ ကြည့်လိုက်တယ်။။။ ဟုတ်တယ် .... အမေ..... ပိန်သေးသေးကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ဘယ်လို အင်အားတွေနဲ့ကျွန်မ နားကိုရောက်လာပါလည်း... အဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မ အမေကို အရမ်းသနားပြီး စိတ်ကောက်နေတာတွေလည်းဘယ်ရောက်ကုန်လည်းမသိဘူး။။။။ အမေ တွေ့ သွားပါပြီးး ကျွန်မရဲ့ ကျန်နေသေးတဲ့
အားလေးနဲ့ လက်ပြလိုက်တယ်။။။။ အမေ ကျွန်မကို တွဲခေါ်ပါတယ်။။။ အမေလည်းလမ်းမှာ..
အင်အားတွေကုန်ခမ်းလာပုံပါပဲ...ဒါပေမဲ့ အမေ ဟာကျွန်မကိုရင်ခွင်ထဲကိုရောက်အောင် ဆွဲခေါ်ပြီးကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဖက်ထားလိုက်တဲ့ အမေမေတ္တာကို ကျွန်မမြင်လိုက်ရတယ်။။။ ခဏနေတော့ မိုးလည်းတိတ်လေလည်းငြိမ်သွားတော့ ပြန်လာကြတယ်။။။ကျွန်မကုန်ခမ်းနေတဲ့အားတွေက အမေမေတ္တာကြောင့်ပြန်လည်းပြည့်လာခဲ့သလိုပဲ အမေလည်း စိုးရိမ်စိတ်တွေလေဒဏ်တွေကြောင့်အင်အားမဲ့နေတဲ့အမေကကျွန်မလက်ကိုတွဲလို့ ပေါ့။။။ အိမ်ရောက်တော့ အမေက သမီးရယ် အမေကို ချစ်ရင်
စိတ်ကောက်တဲ့အခါ အဝေးကို ထွက်မသွားပါနဲ့ ....သမီး အမေကို စိတ်ကောက်ရင် အမေ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်.။။။။ ကျွန်မ မျက်ရည်ဝဲလာပါတယ်။။။။ ရင်ထဲလည်းနင့်နေအောင်ခံစားရတယ်။။။။
ထိုနေ့ ထိုမြင်ကွင်း ကျွန်မ တစ်သက် မေ့ လို့ မရတဲ့ နေ့ တစ်နေ့ ပေါ့။။။။ ထိုနေ့ ကစ ကျွန်မ စိတ်ကောက်ရင် အဖွားတို့ ရွာကို မသွားတော့ပါ။။။ ခြံထဲမှာပဲ ပန်းပင်စိုက် မြက်ပင်ရှင်း လုပ်နေတတ်ပါတော့တယ်။။။။ တကယ်တော့ကျွန်မ စိတ်မကောက်သင့်တော့တာပါ။။။ ဒါပေမဲ့ဥာဉ်ဆိုတာကဖျောက်ဖျက်ဖို့ ခက်ပါလား။။။။ ကျွန်မ အခုထိလည်းဖျောက်လို့ မရသေးပါဘူး။။။။ အဖေကတော့မှာဖူးတယ်... ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေကို စိတ်မကောက်မိပါစေနဲ့ သမီးရယ်။။။။။ ................ကျွန်မ စိတ်ကောက်နေတုန်းပါပဲ. ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုပဲကောက်နေတုန်းပါပဲ......................................................
လမင်း အသက် (၉) နှစ်လောက်က ဖြစ်ရက်လေးပါ... ဘယ်တော့မှမေ့မရတဲ့အမှတ်တရနေ့ လေးပါ။။။
အရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..... အမေ ကျန်းမာ အသက်ရှည်ပြီးလောကကောင်းကျိုးများစွာပြုနိုင်ပါစေ...အမေ...........
Posted by ချစ်စံအိမ် at 1:19 PM
Sweety Snow August 10, 2012 at 3:02 PM
မင်းအရိပ် August 10, 2012 at 5:25 PM
မိခင်မေတ္တာအကြောင်းရေးဖွဲ့ထားတာ တကယ်ကို ပေါ်လွင်ပါတယ်
mstint August 10, 2012 at 5:28 PM
စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်မို့ မကောက်နဲ့လို့တော့
မပြောတော့ဘူး လမင်းလေးရေ။ အရိပ်သုံးပါးကြည့်ပြီးကောက်ပေါ့နော်း)
အိမ်မက်ကောင်းကင် August 10, 2012 at 8:53 PM
မမချစ်စံအိမ်ရေ ဗဟူသုတ ယူစရာကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေး တစ်ခုပါပဲ
သည်ပိုစ့်လေးမှာ သိသင့်တာလေးတွေကို သိရပြီး မိဘရဲ့မေတ္တာကိုကြီးမားကြောင်းလည်းပေါ်လွင်လှပါတယ်
မမချစ်စံအိမ်စိတ်အရမ်းစိတ်ကောက်တဲ့နေ့တွေဆို တစ်အိမ်လုံးမြက်တွေတောင်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော် ^_^
လရိပ်အိမ် August 10, 2012 at 10:27 PM
Anonymous August 10, 2012 at 10:34 PM
ကျွန်တော်လည်း အမေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ထင်ခဲ့မိတာ ... အခုနောက်ပိုင်းမှာမှ သိလာရတာ
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် August 10, 2012 at 11:15 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! August 10, 2012 at 11:47 PM
မိန်းခလေးတွေ တော်တော်များများက စိတ်ကောက်တက်တာ ပဥာတ်တစ်ခုလိုပါပဲမမရေ...
ညီမလေးလည်း စိတ်ကောက်ရတာကို မကြိုက်လို့ ကြိုးစားပြင်နေရင်းနဲ့ပဲ တစ်ခါတစ်ခါတော့
စံပယ်ချို August 10, 2012 at 11:53 PM
အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပိုစ့်လေးကိုဖတ်ပြီး မေမေကိုလွမ်းတယ်လမင်းရေ
အလွမ်းမြို့ August 10, 2012 at 11:58 PM
ညီမလေးရေ...ခလေးဘဝတုန်းက ကောက်တယ်ဆိုတာ မကြီးလက်ခံပါတယ်။ အခုက ခလေးမဟုတ်တော့ဘူး။
ဥဏ်ဆိုးကို အလွှဲသုံးချမဲ့အစား သိနေတဲ့အသိကနေ သတိလေးဆောင်ပြီး ပြင်လိုက်ပါ။
ခုချိန်မှာတော့ အဲလိုစိတ်ကောက်တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့တော့။ အရွယ်တွေရောက်ပြီး အရွယ်လွန်ချိန်မို့
ချစ်သူ.... အိမ်ထောင်ဖက် တွေရလာရင်လည်း ခုလို စိတ်ကောက်တိုင်း စိတ်လိုက်မာန်ပါတာတွေ
မလုပ်မိအောင် သတိဆောင်ပြီး အထူးရှောင်ရှားပါနော်။ ခလေးဘဝမှ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဆိုတာ ချစ်စရာ အကွက်လေးဆိုပေမဲ့ ခုလိုချိန်မှာ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်များရင် ကိုယ်နဲ့ပါတ်သက်သူတွေက
စိတ်ကုန်သွားတတ်တယ်...ကိုယ့်သားသမီးရရင်ရင် ခုလိုစိတ်ကောက်တာ မဖြစ်အောင် အပြောချိုချို
နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာနဲ့ လမင်းမေမေလို ချစ်တတ်သွန်သင်တတ်ပါစေ။။
အဟဲ...ဆရာလေးကို ဆရာလေးအမက ဆုံးမတီ....ခိခိ
တွတ်တွတ် August 11, 2012 at 12:08 AM
အဘိဓမ္မာတရားကိုယ်အရဆိုရင်တော့..လူတိုင်းဟာ.အကုသိုလ်စိတ်(၁၂)ပါးအရင်စကြတာမို့... လိုချင်တဲ့.လောဘအရင်စ၊ အလိုမပြည့်တော့.ဒေါသဖြစ်၊ ဒေါသဖြစ်တော့..ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုတဲ့.မောဟ..ဒါတွေနဲ့ပဲ.ကျင်လည်နေကြရတာပါပဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း.ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာ..စိတ်အလိုလိုက်ပြီး...လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟတွေနဲ့အမှားတွေကို..ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးတာ..မနည်းပါဘူး။ အမှားကိုအမှားမှန်းသိပြီး..အမှန်ကို..ရဲရဲတင်းတင်းပြောင်းလဲရဲတဲ့..လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကိုလုပ်လိုက်ဖို့ပဲ..တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်ဗျာ။
မိုးညချမ်း August 11, 2012 at 3:52 AM
မေမေ့မေတ္တာကြီးမားပုံကိုလည်း သိရတယ် ... မေမေ့ရဲ့နွေးထွေးခြင်းတွေကိုလည်း ခံစားလိုက်ရတယ် ... မေမေတစ်ယောက် အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် မမရေ ... :)
ရာဇာထွေး August 11, 2012 at 5:49 AM
အရိပ် သုံးပါးတော့ကြည့်ကောက်ပေါ့..ဟိုကလည်းကောက်၊ ဒီကလည်းကောက်ဆိုရင်
အကောက် အကောက်ချင်း ငြိကုန်မှခက်ရော:P...အကိုလည်းစိတ်ကောက်တတ်တယ်
အခုချိန်အထိပဲ...အကိုစိတ်ကောက်ရင် ကျန်တဲ့သူတွေ အလုပ်သက်သာတယ်...
ကုန်အောင်သောက်လိုက်ရင် အားလုံးနော်မယ်ဖြစ်သွားရော... ကဲအားပေးသွားပြီ
မင်းမုန်းတဲ့သူ(အလွမ်းကဗျာများ) August 11, 2012 at 6:44 AM
နေမင်း August 11, 2012 at 6:31 PM
ဥာဉ်ဆိုးလေး အမြန်ဖျောက်နိုင်ပါစေ အမရေ...
မိုးသူ(တောင်ကြီး) August 11, 2012 at 7:28 PM
စိတ်ကောက်ရင် ချော့တတ်တဲ့ 
ချစ်သူနဲ့ တွေ့ ပါစေ ...
မြတ်နိူးသူ(MUFL) August 12, 2012 at 1:10 AM
အန်တီလေးမေခင် August 12, 2012 at 1:12 AM
တတိယမြောက်သမီးတော် August 12, 2012 at 6:44 AM
ကူးကူးလှိုင် September 9, 2012 at 3:54 AM
ဒီပို့စ်လေးက တို့ ငယ်ငယ်ကအဖြစ်နဲ့ နဲနဲဆင်တယ်ပြောရမယ် ...